त्रिशुली नदीमा बस खस्यो, १ को मृत्यु, १५ जना घाइते, करिव ३४ जना बेपत्ता
Home / समाचार / त्रिशुली नदीमा बस खस्यो, १ को मृत्यु, १५ जना घाइते, करिव ३४ जना बेपत्ता
त्रिशुली नदीमा बस खस्यो, १ को मृत्यु, १५ जना घाइते, करिव ३४ जना बेपत्ता 0
शनिबार बिहान करिव साढे ५ बजे ना६ख १४६७ नम्बरको सन्तोष ट्राभल्स त्रिशुली नदीमा खसेको प्रहरीले जनाएको छ । बस मोडबाट खसेपछि उछ्ट्टिएर १५ यात्रु नदी किनारमा परेका छन् । उनीहरु घाइते छन् । किनारमा रहेका यात्रुका अनुसार बसमा करिव ५० जना यात्रु थिए ।
५० जना मध्ये १ जनाको लास फेला परेको छ भने ३४ जना बस भित्रै रहेका अनुमान गरिएको छ । प्रहरीले बसभित्र रहेको सबैको मृत्यु भएको हुनसक्ने अनुमान गरेको छ । प्रहरीले उद्दार कार्य जारी राखेको भएपनि बस नदी भित्रै रहेकोले जिउँदो भेट्टाउन मुस्किल रहेको बताएको छ ।
घटनास्थलमा अहिले उद्दार गर्नको लागि कुरिनटाबाट गोताखोर समेत आएकसकेका छन् । उद्दारमा खटिएका धादिङ प्रहरी प्रमुखमा एसपी ध्रुवराज राउतले घाइतेमध्ये २ जनालाई काठमाडौंको ट्रमा सेन्टर लगिएको बताए । उनका अनुसार बाँकी १३ जनालाई गजुरी अस्पतालमा उपचारको लागि पठाइएको छ । उनले भने, ‘बसमा कति यात्रु थिए भन्ने यकिन भएन । घाइतेहरुलाई सोध्दा करिव ५० जना रहेको बताए ।’
गजुरी अस्पतालमा उपचार गरिरहेका यात्रुका अनुसार बसको छतमा समेत यात्रु खचाखच थिए ।
यस्तो छ पाइल्स रोगलाई एक महिनामै चट पार्ने अचुक घरेलु औषधी ! यसरि गर्नुहोसस यसको प्रयोग ? (हेर्नुहोस भिडियो)
आयुष रिमालले यसरी खुलाए लोकप्रिय अभिनेत्री संध्या केसीका यस्ता काण्डै काण्ड ! (हेर्नुहोस भिडियो)